I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile]
Myanmar IT Resource Forum » MOBILE & GAMERS ZONE » » Mobile Zone » I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile]
1 I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 22nd May 2010, 11:26 am
အိုင်ဖုန်း 3.1.3 BB 05.12.01 ကို jailbreak လုပ်လို့ရပါပြီ
2 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 22nd May 2010, 9:14 pm
ဟုတ်ကဲ့ သိချင်ပါတယ် ဗျာ
3 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 23rd May 2010, 1:08 pm
iphone တော့ မကိုင်နိုင်သေးဘူး.. ဒါပေမဲ့... jail break လုပ်တာကို သိချင်တဲ့လူတွေ အတွက်...
link တစ်ခု တွေ့ထားပါတယ်... [You must be registered and logged in to see this image.] ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ...
ကောင်းကျိုးရှိရင် ကျနော် ကြောင့် ပါ... [You must be registered and logged in to see this image.]
ဆိုးကျိုးဆိုရင်တော့ website ကြောင့် ပါ... ( ကိုယ့် ဘက် ကို ယက်တာကွ ) [You must be registered and logged in to see this image.]
4 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 23rd May 2010, 5:02 pm
အော် အစကတော့ Video Training လေးနဲ့လုပ်ပေးမလို့ပါပဲ စာမေးပွဲရှိသေးတာနဲ့ အခုတော့ ဝင်ပြီးတော့ ကူညီပေးလိုက်တဲ့သူရှိနေပြိ ကျွန်တော်မလိုတော့ပါဘူး အဲ့ဒါနဲ့ အဆင်ပြေပါစေ လင့်ပေးတာတော့ဖွင့်မကြည့်ရသေးပါဘူး
သိတဲ့သူကရေးတာဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါ အဆင်ပြေကြပါစေး)
5 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 23rd May 2010, 7:27 pm
moeset wrote: အော် အစကတော့ Video Training လေးနဲ့လုပ်ပေးမလို့ပါပဲ စာမေးပွဲရှိသေးတာနဲ့ အခုတော့ ဝင်ပြီးတော့ ကူညီပေးလိုက်တဲ့သူရှိနေပြိ ကျွန်တော်မလိုတော့ပါဘူး အဲ့ဒါနဲ့ အဆင်ပြေပါစေ လင့်ပေးတာတော့ဖွင့်မကြည့်ရသေးပါဘူး
Video Training လေးဆိုပိုကောင်းမလားလို့ ပါ။ ကျွန်တော်လဲ လောလောဆယ်တော့ iPhone မဟုတ်သေးဘူး။ [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 24th May 2010, 1:59 pm
Window Media Audio:
7 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 24th May 2010, 2:46 pm
4G Beta လေ ဘာ လေ တင် ချင် စိတ် မ ရှိ ဝူးစ လား
8 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 25th May 2010, 1:35 pm
အားတောင်မရှိတော့ဘူး ဘာမှလဲပြန်မပြောကြဘူး တင်ပြီးတော့လဲ
နောက်တင်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေ တွန့်ကုန်ပြီ တင်တော့ဘူး
9 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 26th May 2010, 8:29 am
moeset wrote: အားတောင်မရှိတော့ဘူး ဘာမှလဲပြန်မပြောကြဘူး တင်ပြီးတော့လဲ
ဘာမှပြန်မပြောဘူးဆိုတာက iPhone သုံးတဲ့လူနဲနေသေးလို့ နေပါလိမ့်မယ်။
တခြားဖုန်းတွေ အကြောင်းကော တင်ပါလား။
10 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 29th May 2010, 12:03 pm
Hey buddy .. 'm so excited ... 'm downloading ur software and gonna test it inawhile ........ hope if it works thanks buddy ....
11 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 30th May 2010, 12:45 am
အကို ရေ ကူညီ ပါ အုံန်း .. ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေဖုန်း ကို Unlock လုပ် ပေ ပို့ ယူ လိုက် တာ black sn0w နဲ့ Unlock လုပ် နေ တာ ရ သွား ပြီ .. loading changes ဖြစ် နေ တုံန်း ... စိတ် မ ရှည် လို့ Power ခလုပ် ကို သွား နှိပ် လိုက် တာ ...Boot မ တက် တော့ ဝူး.. ကယ် ပါ အုံန်း
12 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 31st May 2010, 7:08 am
restore Firmware again
13 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 2nd June 2010, 10:54 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-05-26
iphone 3G ကို version 3.1.3 update လုပ်ပြီး jailbreak လုပ်လိုက်တာ Application တွေဘဲသုံးလို
phone network ကလိုင်းမတက်တော့ဘူး
14 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 8th June 2010, 10:20 am
3.1.3 ကို upgrade က ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ နောက် jailbreak လုပ်တာ ကရောဘာနဲ့လုပ်တာလဲ phone network setting (carrier) ကို automatic ထားပြီးတော့ပြန်စမ်းကြည့်ပါလား
15 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 9th June 2010, 5:42 pm
3.1.3 ကို redsnow နဲ့ jailbreak လုပ်လိုက်တာ....
phone network setting (carrier) ကို automatic လုပ်လဲမရဘူး.....
ဆိုင်ကိုမေးကြည့်တော့ network lock ကျသွားတာတဲ့
iphone က 3G နော်.........
network lock ကို unlock ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲ.....?
16 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile] on 9th June 2010, 7:43 pm
hay fri, for I phone 3G its really easy to unlock.U can easily search the way to unlock ur I phone 3G in Youtube Good Luck. Even I phone 3gs 3.1.3 BB 05.12.01 can unlock but I'm not grantee coz i didn't do like it before (I Phone 3GS)
17 Re: I phone 3GS 3.1.3 BaseBand 05.12.01 Jailbreaking [Mobile]